Muhdi - Wikipedia
Reer Sekeriye, Reer Boqor, Reer Faahiye iyo reero kale oo Dishiishe.
Muhdi () (), waa qabiil ka tirsan beelaha Dishiishe ee Dadka Soomaalida. muhdigu waxay deegaan ku yihiin wadamada Soomaaliya iyo Cumaan gaar ahaan gobolka Bari ee Soomaaliya Iyo gobolka Dufaar ee dalka Cumaan iyo deegaano ka mida Yemen, Muhdigu wuxuu ka mid yahay beelaha Bahiwadaag ee hoostaga Dishiishe Harti. 
Muhdi waa beel ka mida beelaha waaweyn ee Dishiishe. (waxaa la tuhmayaa tiro ahaan inay yihiin beesha ugu badan beelaha dishiishe). waxay si ballaaran u degaan gobolka Bari iyo gobolka Dhofar ee dalka Cumaan iyo meelo kale oo ka mida Soomaaliya, Cumaan iyo Yemen. waxay ka mid yihiin beelaha Dishiishe ee sida rasmiga ah degaanka ugu ah magaalada Bosaso waxayn ku jiraan beelaha leh deegaanada ugu ballaaran ee hoos yimaada magaalada bosaso. Waxay ku badan yihiin magaalooyinka Bosaso, Salalah iyo Qaydah ee dalalka Soomaaliya, Cumaan iyo Yemen. Iyo degmooyin iyo deegano kale oo ka tirsan dalalkan.
Gudaha soomaaliya, beeshu waxay degtaa qaybo ka mid ah deegaanada Buuralayda Habeeno iyo Marmar. waxay qayb xoogleh ka degtaa Togga weyn ee Baalade. Sidoo kale waxay qayb balaaran ka degtaa deegaanka Biyo kulule ee dhaca bariga magaalada Boosaaso. Hantaara iyo meelo kale oo dhowr ah. Dalka Cumaan beeshu waxay deegaan aad u balaaraan ka degtaa gobolka Dufaar iyo meelo ka mida gudaha Yemen.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhdi&oldid=191592"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Abriil 2019, marka ee eheed 19:38.